Junediin Sado fi Ergamtoota TPLF Galmee Himatama isaani Kutaa 8faa
Suuraa GPO Editor
Namoon Yaaka Dalagan yoomi ilee ta’aan seeran gaafatamuun hin oluu. Galmee Junedin Sadoo jalattii namoon raggan irrati barbadama jiru dhiyeesuu yaalee keessati namoon heedun dhimmii kun waan Junedin Sadoo qofaa irrati xiyeefatee isaanti fakata ture kana ibsuuf nu barbachisee jira. Tigroon Oromoo irrati yaaka gosa hunda rawwata jiran qoofatii gafatamuuf himatii isaan irrati dhiyaatuuf deema. Galmeen Tigroota adda, namoon galmee kana qoorachuu qabnan ilee amuma qaban goocha jara kana galmeesuu, qoorachuu, hordoofu fi raga itti qoopheefachuu qabuu. Galmee Oganoota OPDO, Galmee Nafxanyoota OPDO keessati guurmani Oromoo fi Oromiyya baleessa jiran qoofatii ilalama. Galmeen Malamaltumaa, ergamtoota fi daldaltoota TPLF galmee mata isaa qabuu ta’aa. Galmee xixiqa ilalaman tarkanfi siireefama irrati fudhataman ilee ni jiratuu.
Himataa Ummataa Oromoo Siirna garboonfta TPLF irrati banamuu deemuu irrati ragga waltii qabnee dhiyeesuu erga egalee turee jira. Galmeen Yaakamtoota Wayyanee bakka 6tii hirmani dhiyaatuu. Isaansii:-
GalmeeMelese Zenawi Ognaoota TPLF hunda fixinsaa sanyii, samichaa Oromiyya Buqifamuu Ummataa Oromoo irratii;
Galmee Junedin Sado faa namoota Oganoota OPDO 350 ol ta’aan;
Galmee Alemu Simee fi Nafxanyoota OPDO Oromiyya samaa jiran 1850 ta’aan;
Galmee Aman Kadrii fi Daldaltoota lafa Oromiyaa gurguran.
Galmeen Miseensoota OPDO walaluman yakka dalagan sadarka mata isaa qabata.
Galmeen Gantota Qabsoo Oropmoo ganan Habasha jala hiriran qoofatii dhiyata.
Mootumma TPLF kufsuuf warii diireeti qabsoo irra jiran ga’ee isaan ba’aacha akka jiran uni warii biyya keessa jiru amoo diini Oromoo kun yaakaa isaan Oromoo irrati rawwacha jira amuma guyya guyyan galmeesun Media Oromoon ga’uuf , sochii isaan qabeenya isaan dhoksa fi biyya alatii bassa jira, kara Kubaniyaa kamii akka bassa jira gartuu Miseensoota Gummi Paarlamaa Oromo (Ethiopian) qoorachuu bara 2005 egalamee, ama gara dargagoota fi ummatati babalatee goochan diina kun qooratama jira. Dhimmuma kanaf bareefama yerro darbee Aboo Irra isiin darbee Naqamtee irrati waan qooranee isiin dhiyeesuf ture gara fula duratii isiin dhiyeesna. Amafi gara Minisootati isiin deebifna.
Hojiin biyya keessa hanga tokko harka lafa jalan deema jiratuu ilee, qabsoon biyya ala ergamtoota TPLF dhunfatamee burjaja’ee qabsoo biyya keessa jajabeesun hafee gufachisuuf baleesuu irra jirachun isaa nama gadisisa. Kana dura wagoota 3 dura Mootumman Ethiopia basastoota 1500 leenjisee biyya alatii bobasuu, Dolara Millyoona 86$ ramadamuu, dame Diaspora directoratii jeedhamuu Ministera dhimma ala fi Embassii Ethiopia biyya hunda keessati ijaruun qabsoo diaspora dhamsun egalamuu isaa ibsii ba’ee ture. Kana Malee Gartuun Junedin Sadoo, Warqinee Gabayoo, Abbadula Gamada, Makiya, Dawanoo Kadiir, Alemayoo Katama Diaspora Minisoota (USA) Oromoota to’achuu saganta jeedhuu qabatan duran dursan namoota Minisoota jiran tokko tokkon erga qooratan firoota isaab biyya jira erga marisisan booda Hawwassa Minisoota fi miseensoota ABO to’aachuu kan jeedhu ergama TPLF hojii heedu hojeechuun xumurchuu isaan yamusuma gabafamee ture.
Utuu hin turiin ABO bakka lamatii Caabuu fi gartuun jijirama walakan TPLFtii galuun bu’aa gartuu Junedin Sadoo faa ta’uu TPLF labasatee ture. Minisoota (USA) duratii Oromoon biyya keessa jiru amanta fi abdii gudda irra qabachuu irra darbee utuuba qabsoo Oromooti jeedhamee ture. Hara Minisoota (Minyapolis) Maddaa Digumsaa, jeequmsaa, gamoo diina, diiree fareen qabsoo irra burqaan jeedhuun iffati biyya keessati labsamee jira. Erga Junedin Sadoo Minisoota ijoolee Arsii qabachuun to’atee bodaa, Oromoon Oromumman ijaramuu dhisee gandan ijarauu egalee, Jalalii Oromumma fi jaaluman qabsoo hafee jaala Amnta fi ganda ta’uun dhufee. Utuu qabsa’oon fi loltuun bilisummaa diiree jira waaan tokko hin dubatiin “Korii Konyaa USA” SG, GS oggani isaa hojii irra rarasuun ABO wagga 40 qabsa’ee guyya tokkotii digamuu ifaa goodhee labsee, Icitiin ABO wagoota 40 of qusannoo tokko malee Paltak irrati gadii basuun Oganoota OPDO fi Baraktati Simyoon faaPaltak “Qalma qabsoo Bilisummaa Oromoo” keessati ta’aan mariachuuf dhageefachuuf caaraa akka argatan tasisee. Waldan Musilimaa Oromoo ati Arsi atii Haragee jeechuun waliin waqeefachuu lagatee.
Diini amoo kana keessa gugachuun Walda Musilima Ethiopia dhabachuun Oromoo wal facasee jiruu kana Ethiopiyma jala hirirsuun Oromummaa balessani jiru. Ergama TPLF ciminan dura dhabachuun tokkumaa isaan kan egachaa turan waldan Kiristiyyan Oromoo Minisoota Torbee darbee diiree jeequmsaa ta’ee jira. Ergama diigumsaa kna keessa Harki wayyanee akka jiru shakiin tokko ilee hin jiru. OSA diiguuf kara hunda shiira gudda irrati goodhama ture fi jiru bu’uureesitoon OSA ciminan dura dhabachuun yoonani ga’aan jiru. Kana irra kan haafee Minisoota waldaleen jirna hundii bakka lama ykn sadtii cicituun dhoksaa miti. Gartuun Minisoota ergama Junedin Sadoon socho’uu kun summii isaani Europa keessa facasuun biyoota Oromoo nami 10 faa jira utuu hin hafiin bakka lamatii qooduun isaan galmayee jira. Gartuun of gurmeesee Oromoo diigee dhumma irrati of isaa diigaa jiru kun ittiba’aa erga Caasaa Junedin Sado Oromummaa diigee Gandaman ijaruun iti milka’ee dha.
Junedin Sadoo akuma Oganoota Afrika hunda Ogana Ummata hunda ta’uu irra ogana gosaa ta’uu filata ture. Junedin Prezdaantii Oromiyya ta’ee yamuu ture kan of ilala ture akka Ogana lammii Oromoo hunda utuu hin tanee akka Ogana Gossa Arsi qofaa ture. Kana nami guyya tokko yerros Caafee Oromiyya deeme ni beeka. Junedin Sadoo Ogana Uummataa Oromoo amanta gargara qabuu utuu hin tanee Ogana Musilma qofaa of goodhee of ilala ture. Junedn Sado ittianaa isaa Dr. Mohamad Alyii fudhatee guyya Argafa Shaka Abdurahiman bukkee dhabatee du’rra bu’ee salata ture. Kun jala musilimuma utuu hin tanee ergama gudda of keessa qaba ture. Torban torban ogantoota Musilma Oromiyya waltii qabuun Shik Abdurahiman irratii kakassa tura. Biyyen isaanti hasalphatuu Sheki Abdurahiman amoo qulqulnuma amanta fi Oromumman dubatuu malee shiraa Junedin faa isaan irrati gegesan hin beekan turan, Kun yerro birra qooran hin xumramiin dabalatee itti fufa.
Waluma galatii Jalaqaba irrati Galeewaan caqasaman suun 6 gara fula duratii waan qooratamuu qaba qooranee dhiyeesina gochaa rawwatama jiru Oromoon keenya akka yaadatanf yaaka TPLF isaan yaddachifna. University Maqalee Keessati yaakii baratoota Oromoo irrati gegefamee qoormata mata isaa danda’ee akka ta’uu baratan Maqaleeti rakko gudaa keessa darbee, Maqaleeti hidhamee, dararamee, baratee hiriyoota isaa 14 waliin raga barumsaa dhorkamee, ergasii bodaa amoo Halikan Finfinneti qabamee Bushoftuu lafa jalatii guyya 5 rebamee waraana WBO tii kan dabalamee Dirirsaa Qajeela Negara Oromiyya bilisomsinne Qoormata TPLF irrati gegefamuu ijan arguuf lola WBOn gegesuu hunda irrati adda duruman hirmachuu irra of hin qasadhuu jeechuun miseensoota Paarlamaa Oromooti qama isaa Alanga Robiin reebamee kukutamee sun Argisifachuun waada seenee Gara diireeti deemee. Oromoon Bilisoomuun hin oluu hawwan Dirirsa Qaleela ilee gaaf tokko dhuga’n ta’ee TPLF/OPDOn Dirirsaa Qajeelan qooratamuun hin oluu.
Falmata Dhugga Oromiyaa irra
Bareefama Junedin Sado ilalatuu asi gadii jiru dubsa: